1 ရလဒ်များ 8-14 ဖေါ်ပြသည်
β-Nicotinamide Mononucleotide ဆေး
Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့်
သင်သည်သင်၏စာမေးပွဲများကိုဖြေဆိုရန်မျှော်လင့်နေသည့်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ အလုပ်များနေသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများတွင်ဖြစ်စေသင့် ဦး နှောက်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ဆေးလုံးတစ်လုံးပေါ်လာခြင်းသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအားမြှင့်တင်သောဆေးများသို့မဟုတ်စမတ်ဆေးများသည် nootropics အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်ကြသလား။ သူတို့လုံခြုံလား။
Nootropics / Smart မူးယစ်ဆေးဝါး / သိမှုတိုးမြှင့်
Nootropics သည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းများ၊ အစားအစာဖြည့်စွက်မှုများနှင့်သိမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုလူသိများသောစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအကူအညီများအဖြစ်အသုံးပြုသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသုတေသနဓာတုပစ္စည်းများသည်သိမှု၊ မှတ်ဉာဏ်၊ စိတ် ၀ င်စားမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုလွန်ကဲသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရောဂါများအတွက်သူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Nootropics ကိုအဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားတယ်၊ အထူးသဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုနှိုးဆွပေးတဲ့အပြင်သိမှုမြှင့်တင်ပေးတယ်။
စိတ် ၀ င်စားမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dopamine ကိုနှိုးဆွပေးသည့်ဆေးများအတွက်ဆေးများကိုတိကျစွာဖော်စပ်ထားပါသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအစားအစာဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကယေဘုယျအားဖြင့် FDA မှအတည်ပြုသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆေးညွှန်း nootropic ကိုသောက်ခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်သင်၌ ADHD ရှိပါက stimulant ဆေးသို့မဟုတ် alzheimer ရှိလျှင် donepezil) သည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုသဘောတူကြသည်။
သငျသညျဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုမှုနှင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အွန်လိုင်း AASraw ထံမှ nootropics အမှုန့် / စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး / သိမြင်မှုမြှင့်တင်ရေးကိရိယာများကိုအွန်လိုင်းမှအဆင်သင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် Nootropic ဖြည့်စွက်ကော်ဖီ၏စွမ်းအင်သက်ရောက်မှုများနှင့်၎င်း၏မြင့်မားတဲ့တုပသောသူတို့အား: နှစ်ခုစခန်းများသို့ကျရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောစိတ်ကြွဆေးဖြစ်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု၊ နိုးကြားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည် (ထို့ကြောင့်သင်၏နံနက်စွဲလမ်းမှုသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ) ။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်“ jitters” ကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် focus-enhancing nootropics သည် L-theanine ကဲ့သို့သောအေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုမျှတစေသည်။ အခြားသူများကမူ ginseng၊ bacopa monnieri နှင့် ginkgo biloba စသည့်မှိုများ၊
Nootropics နှင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေး
ပါကင်ဆန်နှင့်အခြားသိမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်ခြင်းသည်ဆေးပညာတိုးတက်မှုသည်ပျမ်းမျှစုစုပေါင်းသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။ ပို၍ ရှင်းလင်းလာသည်မှာကျန်းမာသောအစားအစာ၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်လုံလောက်သောအိပ်စက်ခြင်းကသင်၏စိတ်ကိုထက်မြက်စေသည့်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းသည်သင်ကျန်းမာသော ဦး နှောက်ကိုတည်ဆောက်သည့်အခြေခံများဖြစ်သည်။ များစွာသော nootropic ဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ အချို့သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမှာသင်၏ ဦး နှောက်တွင်းရှိလေ့လာမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်တာဝန်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Phospholipids နှင့်အခြားအဆီအမျိုးအစားများသည်သင်၏အာရုံခံဆဲလ်များကိုဝိုင်းရံပြီးအချက်ပြမှုနှင့်အတွေးများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပို့ဆောင်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင့် ဦး နှောက်သည်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်အမြောက်အများ (စုစုပေါင်းစွမ်းအင်၏ ၃၀%) ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် antioxidants များထပ်မံပေါင်းထည့်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် oxidative stress များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိစေသည်။ ဤသည် oxidative စိတ်ဖိစီးမှုထိုကဲ့သို့သောအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်အဖြစ် neurodegenerative မမှန်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုသိရသည်။
အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ဖော့စ်ပိုလစ်ပိုဒ်များနှင့် antioxidants များသည် nootropic ဖြည့်စွက်ချက်များစွာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်ပြသထားသည့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုအကောင်းဆုံးလည်ပတ်စေသည့်ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုလိုအပ်ပါကသီးသန့်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များပါ ၀ င်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်သင်၏ nootropic ဖြည့်စွက်မှု၌ပါ ၀ င်သည့်အရာများကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။
acquisition သင်ယူမှု၏တိုးတက်လာမှု - သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်
agents ချို့ယွင်းသောအေးဂျင့်များကိုခံနိုင်ရည် - ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့သည်
inter သတင်းအချက်အလက်များအပြန်အလှန်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် - ပြုပြင်ခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်
brain ဦး နှောက်၏ကျူးကျော်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - ဦး နှောက်ကိုကာကွယ်ပါ
❺တိုးမြှင့်လုပ်သူများ, cortico-subcortical '' ထိန်းချုပ်မှု - အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
uro အာရုံကြောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများ၏ပုံမှန်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်း - လုံခြုံစိတ်ချရမှု
သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အမှုန့်များဖြင့် AASraw တွင် Nootropics ရရှိနိုင်သည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းများကိုသုတေသနတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအယ်ဇိုင်းမားနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကဲ့သို့သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုသမှုများကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသိမြင်မှုအားနည်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
သုတေသနဓာတုပစ္စည်းများအနေဖြင့် nototropics သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ယုတ္တိရှိရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းစသည့်သိသာထင်ရှားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကူညီရန်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါသူတို့၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ။
Nootropic Powder တကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား? သေချာတာပေါ့
၎င်းသည်ဖြည့်စွက်ဆေး၊ ဆေးညွှန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဘီလ်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်စေ nootropics ၏ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာရှိသောကြောင့်ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းသည်။ Donepezil, L-Deprenyl, Methylphenidate (Ritalin), Modafinil (Provigil), Piracetam စသည့်ဆေးညွှန်း nootropics သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ထိရောက်ကြောင်းပြသသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသိပ္ပံနည်းကျယိုယွင်းမှုရှိသူများအားဤဆေးများသည်မည်သည့်အရာအားအထူးကူညီနိုင်မည်နည်း။
အဲဒီမှာသဘာဝ nootropics တွေဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကတိပေးတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထောက်အထားအခြေပြုဖြည့်စွက်ဆေးနှင့်အခြားဆေးပညာ၏သုံးသပ်ချက်အရသဘာဝ nootropics သည် ဦး နှောက်သို့သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်အောက်စီဂျင်တိုးခြင်းကိုကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင် nootropics သည် antioxidant အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဦး နှောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်ဟု BioTRUST Nutrition ၏သိပ္ပံပညာရှင်အကြီးအကဲ Shawn Wells၊ RD, FISSN, CISSN သို့သော်ခန်ဓာကိုယ်ကိုအိုမင်းခြင်း (သို့) antioxidant သက်ရောက်မှုရှိသည့်မည်သည့်ဒြပ်ပေါင်းမဆို ဦး နှောက်၏ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုဝဲလ်ကရှင်းပြသည်။
Nootropics အန္တရာယ်ကင်းသလား။ ဟုတ်တယ်
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့ - nootropics သည်လုံခြုံသည်။ သို့သော် nootropic နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကြားတွင်များစွာသောအမှုအရာတစ်ခုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သင်၏ ဦး နှောက်စွမ်းအားကိုစိတ်ချစွာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဤစည်းမျဉ်းနှစ်ခုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
မှန်ကန်သော nootropic ကိုရွေးချယ်ပါ - အရည်အသွေးမြင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလက်မှတ်များ၊ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောဖော်မြူလာများနှင့်သန့်ရှင်းသောတံဆိပ်များ၊ လိုအပ်သောစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်း။ ဤစည်းမျဉ်း (၂) ခုနှင့်အတူ၊ သင်သည် ဦး နှောက်စွမ်းအားအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်နှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုနည်းပါးသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဆက်လက်တည်ရှိပြီး၊
AASraw တွင် Nootropic Powder ကိုဝယ်ပါ
အကောင်းဆုံးအတွက် Nootropics အမှုန့် ... အကြံပြု Nootropics အမှုန့်
အပြောင်းအလဲမြန်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ စီးဆင်းခြင်းနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း Acetyl-L-Carnitine (ALCAR), Aniracetam၊ ကဖိန်း၊ CDP-Choline, ခြင်္သေ့ရဲ့လည်ဆံမှို၊ NALT, B-Complex
သင်ယူခြင်း & မှတ်ဉာဏ် Aniracetam, Bacopa Monnieri, CDP-Choline, DHA, L-Theanine, Phosphatidylserine (PS), Pine Bark Extract
စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ Aniracetam, CDP-Choline, Bacopa Monnieri, L-Theanine, Rhodiola Rosea, Sulbutiamine, B-Complex
စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု Acetyl-L-Carnitine (ALCAR)၊ အာလဖ Lipoic Acid, ကဖိန်း၊ CDP-Choline, Rhodiola, CoQ10, PQQ
ဦး နှောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း Acpyl-L-Carnitine (ALCAR), Aniracetam, ကဖိန်း၊ CDP-Choline, DHA, Phosphatidylserine (PS), Vinpocetine, Rhodiola Rosea, Pine Bark Extract
အခြားအားသာချက် Nootropics အမှုန့် J-147, CAD031, CMS121
Nootropics Powder အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
 Paydary K. (2016) ။ အလယ်အလတ် -to- ပြင်းထန် obsessive-compulsive ရောဂါများအတွက် N-acetylcysteine ​​တိုးပွားကုထုံး: ကျပန်း, double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ လက်တွေ့ဆေးဆိုင်နှင့်ကုထုံး၏ဂျာနယ်။
 Albertson TE, Chenoweth ဂျေအေ, Colby DK, Sutter ME (ဖေဖော်ဝါရီ 2016) ။ "ပြောင်းလဲနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးယဉ်ကျေးမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အသိပညာတိုးပွားစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွဲသုံးစားမှု" ။ FP အခြေခံလိုအပ်ချက်များ 441: 25-9 ။ PMID 26881770 ။
 Goldman P (အောက်တိုဘာ 2001) ။ "ယနေ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ခေတ်သစ်ဆေးဝါးဗေဒ၏အရင်းအမြစ်များ" ပြည်တွင်းဆေးပညာရာဇဝင်။ 135 (8 Pt 1): 594-600 ။
 ဟောင်ကောင်။ et al ။ (2011) ။ Ganoderma lucidum ၏ Spore Powder သည်အစာအိမ်ကင်ဆာကုသမှုခံယူနေသောရင်သားကင်ဆာလူနာများတွင်ကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ဆေးခန်း။ သက်သေအထောက်အထား -based ဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးပညာ။
 မြို့ပြ KR, Gao WJ (2014) ။ ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဦး နှောက်အတွင်းရှိ nootropic ဆေးဝါးများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စနစ်များအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 8: 38 Doi: 10.3389 / fnsys.2014.00038 ။ PMC 4026746. PMID 24860437 ။
 တိ N. Ziegenfuss ။ et al ။ (2016) ။ အောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှု၊ ဟီမိုဒိုင်းနမစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာချက်များ၏ Theacrine (TeaCrine®) ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန်အပိုင်းနှစ်ပိုင်း။ အစားအသောက်ဖြည့်စွက်၏ဂျာနယ်။
 Fond G, Micoulaud-Franchi JA, Brunel L, Macgregor A, Miot S, Lopez R, et al ။ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅) ။ "ဆေးဝါးသိမှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုယန္တရားများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။ 2015 (229-1): 2-12 ။ Doi: 20 / j.psychres.10.1016 ။ PMID 2015.07.006. S26187342CID2။
 Clemow DB, Walker DJ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄) ။ ADHD ရှိဆေးဝါးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းအတွက်အလားအလာ - သုံးသပ်ချက်။ ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာ။ 2014 (126): 5-64 ။ Doi: 81 / pgm.10.3810 ။ PMID 2014.09.2801. S25295651CID2။